DDOS Concepts – Legion of LOL
March 2, 2017 Lunam00n Uncategorized 4
Distributed Denial of Service (DDOS) လို့ခေါ်တဲ့ attack အကြောင်း အများကြီးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်။ စဉ်းစားလို့ရအောင်လို့ပါ။ အပြည့်စုံတော့မရေးနိုင်ဘူး။ အများကြီးပဲဆိုတော့ concepts ပဲ အဓိကတွေးမိတာလေးရေးထားတာ။ တချို့ကလဲ လုပ်ချင်တာပဲသိပြီး တချို့တွက်စရာရှိတာလေးတွေမတွက်မိရင် အလွဲအလွဲအချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်မှာ။
ကျနော်သိသလောက်တခါတလေ OP (Operation) တွေလုပ်ကြပါတယ်။ ဒီအခါမှာ တော်လှန်ရေးစိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်သူများ ( Beginner များသာ ) က မိမိအနေနဲ့ တစ်ခုခု တပ်စွမ်းသလောက်ပါဝင်လှုပ်လျှားဖို့ တာဆူလာတတ်ကြတယ်။ ဒီအခါမှာ နည်းနည်းတွက်ဆတတ်ဖို့ အကြံပေးချင်တာပါ။ သိပြီးသားသူတွေကတော့ သိပြီးနေပြီဆိုတော့ သူတို့ဘာသာ လုပ်ကြလိမ့်မယ်။ တခါတလေ ဦးဆောင်တဲ့သူလွဲသွားရင် သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်တဲ့အခါမှာ Ph bill တွေဘာတွေမလိုအပ်ပဲကုန်သွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တွက်ချက်ဖို့လိုမယ် ခေါင်းဆောင်ကောင်းလိုမယ်။
အခုလိုမျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်နေတဲ့ ညီအကိုတွေအနေနဲ့ တခါတလေ အသားထဲကလောက်ထွက် သစ္စာဖောက်တွေနဲ့ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ အခုလိုစိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်နေတဲ့သူတွေကို Ddos tool ဘာညာ ဆိုပြီး RAT တို့ Botnet တို့ Bind ပြီး သစ္စာဖောက်ကြသော ဂျပန်စကားပြန်များနှင့်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သတိထားပါ။ ကိုယ်အရင်ခံရသွားနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းဘေနဲ့သုံးနေရတဲ့အများစုက DOS က request တွေအများကြီးပို့တာဖြစ်တဲ့အတွက် Bill ကတော့ရက်ရက်စက်စက်ကုန်မှာပါ။ ပုံမပါပဲ code တွေချည်းပဲဆိုပါတော့။ google ကိုသာခေါ်ရင်ဘယ်လောက် size ရှိမလဲကြည့်ရအောင်။
10 Kb အဲဒါစာချည်းပဲနော်။
Our ISP (telenor)
Target ရွေးတဲ့နေရာမှာလဲ အရေးပါသေးတယ်။ ဥပမာဆိုကြပါစို့ တစ်နေ့နေလို့ ၁ ယောက်ဝင်မကြည့်တဲ့ Website တစ်ခု သူ့ဟာသူ gov ပဲဖြစ်နေဦး။ ကျနော့်အနေနဲ့တော့ ဘာမှအရေးမပါဘူးလို့ထင်တာပဲ။ အပေါ်က Badget plan နဲ့သာဆို ISP တွေကိုလုပ်ကျွေးယုံသက်သက်ပဲ။ Denial of Service ဆိုတာ အနှောင့်ယှက်ပေးတယ်ပဲဆိုကြပါစေဦး။ အနှောင့်ယှက်ဖြစ်မှ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလား? Work done ပေါ့နော်။ ဥပမာ အရေးကြီးသတင်းအချက်လက်တစ်ခုကို တင်မယ့်နေ့မျိုး အားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့အချိန် Website ကခေါ်မရဘူးဆိုရင်တော့ Work done ပေါ့။ ဒီလိုမျိုးထည့်တွက်သင့်တယ်မဟုတ်လား ? ဟီး ပြောပြတာနော် လာဆဲမနေနဲ့ဦး 😀
Some DDOS tools
VPS server တွေကတော့ ဒီမှာလဲရောင်းတဲ့သူတွေရှိသလို Online ကနေလဲကိုယ့်ကိုဝယ်လို့ရတယ် Credit card ရှိရင်ပေါ့။ ဒါကကျတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ Bandwidth နဲ့မဆိုင်ဘူး VPS ရဲ့ bandwidth နဲ့ပဲဆိုင်တာဆိုတော့ ခုန Budget plan မှာ Ph bill တွေသိပ်မကုန်တော့ပဲ VPS ရဲ့ ကုန်ကျငွေပဲရှိတော့မယ်။
DDOS with Botnets
ဒီတစ်ခါကျတော့ Badget plan အနဲဆုံးဖြစ်ပြီး bots တွေများရင်များသလို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်ပါတယ်။ မိမိ Computer ကနေ C & C (command and control) server ကိုသွားတဲ့ request ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ bandwidth အားလုံးလဲ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။ အရမ်းကြမ်းတယ်ဆိုတာတွေဖြစ်လာရပါတယ်။
Botnets Wiki ( Link )
Botnet တွေက ပိုမိုက်တယ်ဟဆိုပြီး စမ်းကြတဲ့အခါမှာ နောက်ထပ်မှတ်သားစရာလေးတွေပြောချင်ပါသေးတယ်။ ဟိုအရင်က ဂျပန်စကားပြန်လောက် ဂျင်းထည့်ခံရတာ Botnet တွေကိုင်မှ AV (Anti-Virus) မသိအောင် FUD (Fully Undetectable) crypter တွေလိုလာ Botnet builder တွေလိုလာနဲ့ဆိုရင် Bind ထားတာလေးတွေကိုထမ်မံရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ Bot အပေါ် bot ဆင့်ပေါ့။ Botnet ဆိုတော့လဲ ကိုယ့်အလှည့်ကျတော့ AV နဲ့စစ်လို့ကမရ။ VM တွေဘာတွေနဲ့ စမ်းပေါ့။ VPS ပေါ်တင်စမ်းပေါ့။
စသည်ဖြင့်ရှိကြပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ဒီမှာပဲနောက်မှ edit လုပ်ပြီးသေချာပြောပြပေးပါတော့မယ်။ တော်တော်များတယ်ရှင်းပြရမှာ။ TCP syn flood , HTTP flood စတာတွေအပြင် One Billion Laugh Attack ( XML Bomb) , Ddosing SQL တို့လို့ Web Service ကနေတိုက်တာဘာညာသာရကာတွေကလဲရှိသေးတာကိုး ။ 😀 ခုတော့ ဒီလောက်ပဲစဉ်းစားထားပါဦး။
မှတ်ချက်။ ။ ပုံတွေက ဟာသ သဘောနဲ့ထည့်ထားတာနော် ဖတ်လို့ကောင်းအောင်လို့ပါ ဥပမာပေးတာပါ။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သိထားရအောင်လို့ပါ
openSuSE ကို vm wareပေါ်မှာ တင်နည်း
ဟီး ကျေးဇူးပါ ဆက်ရေးဦးမယ် 😀
Waiyan Ye Yint
လိုချက်​တဲ့အချက်​​တွေရယ်​ Link ​တွေရယ်​ရလို့​ကျေး​ကျေးဗျာ